श्रीमानले श्रीमतीलाई भूलेर पनि नभन्नुहोस् यी ५ कुरा, नत्र बिग्रिनसक्छ सम्बन्ध…. – SUDUR MEDIA
August 10, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमानले श्रीमतीलाई भूलेर पनि नभन्नुहोस् यी ५ कुरा, नत्र बिग्रिनसक्छ सम्बन्ध….
काठमाडौँ । भनिन्छ, श्रीमान-श्रीमतीमा ‘केयरिङ’ र ‘शेयरिङ’ हुनुपर्छ। अर्थात हरेक कुरामा दुबै खुलस्त हुनुपर्छ। एकअर्काको कुरा आपसमा साझेदार गर्नुपर्छ। सही हो, कुरा लुकाउँदा विश्वास टुट्छ । विश्वास टुटेपछि सम्बन्धमा फाटो आउँछ। शंका-उपशंकाले ठाउँ पाउँछ। अन्तत यसले दाम्पत्य जीवनलाई खल्लो बनाइदिन्छ।
तर, अर्को पक्ष पनि छ । श्रीमान श्रीमतीले आफुलाई सर्वाङ्ग हुनेगरी सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने छैन। अझ कतिपय कुरा त यस्ता हुन्छन्, जसलाई शेयर गर्दा थप जटिलता आउन सक्छ। सबै कुरा भन्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कतिपय कुरा, जो नभनेकै राम्रो हो। त्यस्ता कुरा लुकाउँदा दाम्पत्य सम्बन्ध धराप पर्ने पनि होइन । र, पारिवारिक जीवनलाई असर गर्ने पनि होइन । त्यसैले केहि कुरामा गोपनियता अपनाएकै राम्रो हो।
अपमानको कुराः यदि कतै अपमान भएको छ भने आफ्नी पत्नीलाई तबसम्म नबताउने जबसम्म उनी आफुलाई मद्दत गर्ने अवस्थामा हुन्नन्। अधिकांस महिलाहरु भावुक हुन्छन् र आफुलाई अपमान भएको कुराले उनलाई चोट लाग्छ। त्यसैले सकेसम्म यसलाई आफू एक्लै सामना गर्ने प्रयास गरौं। आफ्नै परिवारको नराम्रो कुराः पतिले पत्नीसँग आफ्नो परिवारको कुरा काट्नु हुँदैन। आफुले भनेका कुराबाटै उनले परिवारप्रति आफ्नो धारणा बनाउने छिन् । यदि हामीले नकारात्मक कुरा गर्‍यौ भने परिवारप्रति उनको धारणा नकारात्मक बन्नेछ र परिवालाई सम्मान दिन छोड्नेछिन्।
अरुको चरित्र हत्या हुने कुराः पतिले पत्नीसँग कसैको चरित्रलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन। महिलाहरु आफ्नो मनमा कुरा अड्याउन सक्दैनन् । यदि उनले कसैसँग कुरा खुस्काइन् भने भोली झमेलामा पर्न सक्नुहुन्छ। पत्नीलाई अरुसँग तुलना नगर्नेः पतिले ध्यानमा राख्नुपर्छ कि महिलाले आफूलाई कसैसँग तुलना गरेर तल पारेको मन पराउँदैनन् ।
तुलना गरौं, तर सँधै उनलाई श्रेष्ठ देखाउनुपर्छ । सँधै तारिफ मात्रै गरिरहनुपर्छ। यसबाट पत्नी पनि मख्ख आफु पनि खुशी । श्रीमतिका आफन्तको कुराः हरेक व्यक्तिले आफ्ना बाबुआमालाई प्रेम गर्छन्। हामीले आफ्नो पत्नीको बुवाआमा र माइती परिवारलाई कहिले पनि अवहेलना गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो गरियो भने उनको मनमा ठूलो चोट पुग्छ।
यी ४ राशिका व्यक्तिहरु मित्रता कायम गर्न जान्दैनन् , कतै तपाई पनि पर्नुभयो कि ?